5 Email Mobile Trend Need Kwesịrị Intna-echebara Echiche | Martech Zone
Otu n’ime ihe ndị anyị na-eme bụ ị paya ntị na ntụnyere nke okporo ụzọ anyị na ọnụego emeghe site na otu ọnwa gara aga ma ọ bụ otu oge n’afọ gara aga. Lele usoro nke gị na ịhụ ka ị na-arụ dị mkpa - mana ị ga-agbanwe maka etu ndị ahịa si agbanwe. Mobile bụ otu n'ime ebe ị ga-a attentiona ntị ebe ọnụọgụgụ ahụ dị iche na oge.
N'ime afọ ole na ole gara aga, mobile etolitela iji chịkwaa akụkụ dị mkpa nke ala email. Oghere ya, na-eme ihe dị ka 50% nke ngụkọta mepee n'ime afọ, na-eme ka ịchọrọ maka ekwentị dị mkpa maka ndị ahịa niile. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na mkpanaka abawanyela mkpa ọ dị, desktọọpụ na webmail ka bụ akụkụ dị mkpa nke ahịa email. Iji nyere gị aka bulite usoro email gị iji jikọọ na ndị ahịa gị, ozi ọhụụ ọhụrụ anyị gosipụtara isi ihe ise dị mkpa ị ga-achọ ịma.
Na ihe omuma a, Usoro 5 nke Mobile si ReturnPath, ị ga-ahụ ụfọdụ mgbanwe na-adọrọ mmasị na omume maka iji ekwentị:
Ihe karịrị 50% nke ozi ịntanetị niile na-emeghe ugbu a na ngwaọrụ mkpanaaka. Ejiri ozi ịntanetị gị kachasị maka ikiri ekwentị?
Email na-emeghe ọnụego na-aga na a ala na-emekarị ka anyị na-eru nso Christmas ụbọchị. You na-eziga ma?
Mbadamba ụrọ ma e jiri ya tụnyere iji ekwentị eme ihe agbanwebeghị nke ukwuu n'afọ gara aga.
Ikekọrịta ndị na-ege gị ntị site na mba nwere ike ibute omume email dị iche n'etiti nyiwe na ngwaọrụ.
Ọ bụrụ n’ị nọ n’otu ụlọ ọrụ a kapịrị ọnụ, ị ga-ahụ nsonaazụ dị iche iche karịa akara aka email.
Tags: desktọpụ email emeghe uduakwụkwọ ozi desktọọpụemail mkpanakaemail mkpanaka emeghe ọnụegoomume ekwenti mkpanakaozi ederedeahịa efuọnụego emegheusoro ekwentịlaghachiemail mbadambambadamba email emeghe ọnụegoozi mbadamba